Agbamume bara uru maka gvSIG - Onyinye Chama Aka Europa - Geofumadas
Julaị, 2015 GvSIG, innovations
Ọ dị mma ịmara na gvSIG enwetawo onyinye mba ụwa n'oge Ihe Mgbochi Europa na-adịbeghị anya.
Onyinye a na-enye ohere maka ọrụ nke na-eweta ihe ọhụrụ na ngwọta na-adigide nye obodo ụwa. N'ezie, ọ bụrụ na ha tinye uru na INSPIRYE ha na-ejikwa teknụzụ dị na NASA World Wind.
Ụwa kwalitere nke ọma adị afọ ole na ole gara aga na nkwụnye naanị ya, nwere ọtụtụ myirịta na Google Earth na uru n'akụkụ dị ka ibu nke ọrụ OGC na arụmọrụ nke egwuregwu ụmụaka ama ama Google nwere naanị n'ụgwọ akwụ ụgwọ. Ọ ga-ekwe omume ịwụnye na Windows, ọ bụ ezie na e nwere nsụgharị maka Linux; karịrị oge World Wind na-akpa àgwà na ọ were SDK ka onye ozo na-emepe emepe nke ndi di iche iche di iche iche na - aru, dika Geoforge Project, Dapple, SERVIR-VIZ, Punt na WW2D.
Dị ka ihe ike na continuity, na-adịbeghị anya na-NASA akpali emejuputa na onodu nke European Challenge Award, nke taa anyị ụtọ ịhụ ezubere iche na-emeri nascent GIS software na ihe ndị kasị zuru ebe nile otú anya Hispanic gburugburu ebe obibi.
GvSIG winnings na onyinye a
GVSIG Foundation enweela obi ụtọ ịbanye na Synergy, na-egosi ihe ha nyere SDK nke NASA World Wind, ha ewepụta ya na FOSS4G Europe mepụtara izu gara aga na Ịtali.
Onu ogugu a na-abia inye gvSIG ihe na-akpali mmasi, nke kemgbe otutu afo ka noro anya ma na-eto n'ime usoro nke ubochi efu, na-agabiga ebe obibi ya. Ewezuga ọnọdụ Latin America, ebe gvSIG achọtala ebe mara mma, gburugburu ndị ọzọ dịka obodo Russia na Italiantali na-ejigide ọrụ dị egwu na-adọta uche.
Akụkọ ọjọọ ahụ na-adịgide, ma ozi ọma ahụ adịghị agbakwụnye mgbe niile.
Obi dị anyị ụtọ ịkọ na akụkọ a ga-agbakwunye, karịsịa n'ihi na ọ na-abịa nanị ọnwa abụọ ka anyị tetara n'ụra na Jorge Sanz na-ahapụ Prodevelp. Anyị maara nke ọma na ndị mmadụ nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ụlọ ọrụ, mana anyị kwenyesiri ike na enweghị ike ha na-eme mgbe ha na-enye onyinye dị mma na obodo ndị ha na-esonye, ​​ọkachasị ma ọ bụrụ na nsogbu ndị ọhụrụ na-egosi mgbochi nke dịbu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omume ntụrụndụ. Enweghi m ike ịchọta ụzọ m ga-esi kọọ ọdịda Xurxo site n'akụkụ a, mana mgbe nkwanye ùgwù m debere maka ọkachamara na ịnụ ọkụ n'obi ya maka mmekorita, ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ masịghị anyị, anyị ga-atụ uche ya. Anyị na-atụ anya na ịmara otu ị ga-esi na-arụsi ọrụ ike n'ihe ị maara otu esi eme yana na ị nwere ike ịkọwa ya dị ka: gbakwunye na ịnụ ọkụ n'obi pragmatic.
Na mbido mmechi, European Challenge award bụ inye ọhụhụ ka gvSIG na n'ezie ugbu a, nwere ike ịma aka ndị na-achọ ihe ego oru na nwere ike ime ihe otú ndị obodo ya onwe ya na-achọ na-eduzi ọhụụ, karịsịa mba na emepe emepe, ihe karịrị ọzụzụ na mmejuputa iwu nke ugbu a ka ọ dị ugbu a ma na-eto eto.
Atụ anya na ọchịchọ
Ọ ka na-echegbu onwe ya dị ka nhụta nke gvSIG na ọnọdụ Google ruru ala ya na oge kachasị mma n'oge 2009 na 2011, mana n'ime afọ atọ gara aga ọ na-ada. Ekwesịrị igosipụta nke a na ọnụọgụ nke nbudata ngwanrọ, ọrụ obodo, yabụ ndị mmepe; M pụtara ma iwu ndị si Academy ma ọ bụ ego ulo oru mbo na furry ndị na-eme koodu si ụlọ jupụtara anwụrụ ọkụ na biya.
Maka nke anyị, anyị kwenyere na gvSIG ga-ejigide akara siri ike na obodo ahụ hụrụ Java na koodu efu n'anya. Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ ihe ịma aka siri ike ijikwa akụ na ụba, njikọ aka ma kwalite mmepe nke arụmọrụ na-atụ aro site na enweghị ndidi nke nwere ike ịbawanye visibiliti na gburugburu Anglo-Saxon. Karịsịa na ọkwa nke ndị ọrụ njedebe na-achọ ịntanetị maka echiche ndị ọzọ.
O doro anya na ọ dịghị mfe ịnọ n'azụ ọnụ ọgụgụ, mana nke ahụ bụ ihe benchmarking bụ maka, ọtụtụ ihe na-emeghe oghere ebube. Mmetụta nke enweghị otu akụnụba akụ na ụba dị ka 5 afọ gara aga, na-efunahụ nnukwu akụ na ụba ma ọ bụ na-eche ihu na ụba akụ na ụba na mmekọrịta nke ndị mmekọ, nwere ike wezuga ya site na ịghaghachi usoro ọgụgụ isi nke yiri ka ọ na-arụ ọrụ maka nwanne nwanyị (QGIS) ) na, dika nke 2011, jisiri ike na-eto eto na oke uzo, dika egosiputara na ihe ngosi nke ihe abuo.
Abịa na nkwado, ahapụla obere ohere. Dị ka ihe atụ, anyị ga-eleba anya n'ihe na-eme na Lagina imekọ ihe ọnụ oru na America na-akwalite bilateral, multilateral ma ọ bụ ụgwọ mgbagha ego si Europe nwere obere ihe ọmụma ma ọ bụ uche na gvSIG; ọ gaghị adị njọ inyocha ihe na-eme n’ozi ha na-anata.
Anyi aghaghi ime ka o doo anya na n'ime usoro ihe omuma nke n'efu, nke a abughi mpi kama o bu mmekorita. gvSIG dị maka Java na QGIS maka C ++, ha abụọ maka ikpo okwu; Ọrụ GIS maka Java ga-adị mkpa mgbe niile, ọ bụrụhaala na ọ na-ekwusi ike ọnọdụ ahụ na gburugburu mmepe. Ọ dịkwa mma na ọ dịbeghị mgbe ụdị OpenSource na mmepe nke obodo na-emekọrịta ihe dị ka nke dị ugbu a; Naanị ị ga-ahụ ọnwu nke atumatu dịka OpenStreetmap, Wikipedia, WordPress, ịkpọ aha ole na ole, nyela atụmatụ ọdịnala. Mana anyị kwesịrị ịmara na na ụwa zuru ụwa ọnụ anyị bi na ya taa, ịkwalite usoro ngbanwe nke usoro ndụ nke ngwaahịa ga-ekwe omume site na ịkwado n'ụzọ ziri ezi ụkwụ ole na ole nke azụmaahịa teknụzụ mepere emepe na-akwagide: Isi, ihe ohuru na obodo.
Anyị kwenyere na atụmatụ nke ịmekọrịta na NASA World Wind SDK bụ ihe bara uru iji zere itinye ego na mmepe ihe dị adị na nke ahụ anaghị achọ ịmegharị site na ncha. Anyị kwenyere na enwere ike ịme atụmatụ dị ka nke a ogologo oge (na-ekwu maka ịga n'ihu usoro ntinye OSGeo yana mmekọrịta na ọba akwụkwọ nnabata geek) yana na, karịa njikarịcha nke akụrụngwa, ọ bụ mkpebi na-atọ ụtọ n'ihi mmekọrịta mmekọrịta ụwa.
Na mpụga nke enweghị nchekwube na akụkụ nke isiokwu ahụ, anyị na-achọ ịkọwapụta nyocha bara uru. Anyị na-ekele ndị gvSIG niile na-akwado nkwado ha na nnukwu mbọ. Ekele dịrị ndị na-akwalite maka ihe ịga nke ọma a na ihe ọhụrụ nke ga-eweta mkpụrụ nke ọhụhụ na njikọta ọhụrụ.
Ozi ndi ozo: GvSIG Foundation Foundation
Previous Post«Previous Cadastral akwụkwọ ihe akpaghị aka CAD / GIS
Next Post N'ike mmụọ nsọ - ndkpụrụ nke teknụzụ GIS - ESRI UC ụbọchị mbụNext »